GUGA BEERTA BEERTA HIBISCUS: SIDA LOO CIRIBTIRO CALEEMAHA KADIBNA QAADO DARYEELKA, MAXAY TAHAY SABABTA LOO BAAHAN YAHAY OO INTA BADAN LOOGA BAAHAN YAHAY, WAXA LA SAMEEYO HADDII DHIRTA BAABA'DO? - GURI, GURI
Dhammaan macluumaadka ku saabsan hibiscus beerashada guga - xeerarka aasaasiga ah iyo nuucyada
Hibiscus beerta waxay yeelan kartaa nooca muhiimka ah ee geed iyo geed ama xitaa geed dabiici ah. Waxa uu mulkiilaha ka farxin karaa ubaxyada quruxda badan muddo dheer, gaar ahaan daryeel fiican.
Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida si habboon loo daryeelo hibiscus beerta iyadoo la isticmaalayo manjooyin iyo marka ay ka fiican tahay in laga soo saaro caleemaha - guga ama mararka kale ee sanadka iyo sababta. Sidoo kale qodobka waxaan eegeynaa daryeelka dambe ee ka dib marka la gooyo, iyo sidoo kale in la ogaado waxa la sameeyo haddii dhirtu baaba'do.
Maxaan ugu baahanahay inaan ka tirtiro laamaha?
Sida caadiga ah, dhirta waxaa inta badan la isku duraa si ay u siiyaan qaab gaar ah taajkii iyo ka takhalusaan caleemo daciif ah ama buka.
Mararka qaarkood caleemaha gaboobay oo keliya ayaa ku baxa oo aan ku dhowaan jirin kuwa cusub, marka xaaladaha noocaan oo kale dhirta sidoo kale waa la iska jaraa. Ka saara laamihii hore ayaa leh saameyn dib-u-dhalasho oo ku saabsan hibiscus.
Geedka jirran ama dhimanaya waxaa la isku duraa inuu sii dheeraado noloshiisa.
Gooyo ma dhaawacayso baadiyaha caafimaad qaba midkood: waxaa jiri doona laamo badan, taas oo micnaheedu yahay ubaxyo badan, maxaa yeelay ubaxa waxaa lagu sameeyay oo kaliya on saqafyada yar yar.
Mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la gooyo xididada haddii ubaxa uusan horay u dhejin dheriga (xaaladdan, daryeel gaar ah ayaa loo baahan yahay).
Maxaa dhici doona iyada oo aan laga saarin caleemaha?
Laamood oo daciif ah ayaa kori doona, taas oo ka dhigi doonta ubax. Caleemaha sidoo kale waxay bilaabaan inay gooyaan oo ay noqdaan kuwo gaaban ama curi ah. Ubaxyada ubaxa waxay u muuqdaan kuwo ka yar. Hibiscus waxay noqon doontaa mid ka yar tiyaatarka iyada oo aan taaj qurxin, caleemaha waxay u koraan fawdo, waxaana jira ficil aan lahayn kuwa cusub.
Haddii aadan ka saarin xididada xad-dhaafka ah waqtiga, hibiscus ma awoodi doonto inay ku haboon tahay dheri.
Goorma iyo imisa jeer baa loo baahan yahay?
Waxaa wanaagsan inaad sanad walba gooyso guga (si ay caleemaha cusub u muuqdaan) iyo dayrta (ee koritaanka caleemaha lateral) waqti. Inta badan gooyaa guga, sida tani waxay keenaysaa in la sameeyo caleemaha cusub, oo kaliya waxay u muuqan karaan ubax. Laguma talin in la gooyo xagaaga, haddii kale ubaxu marnaba ma muuqan karo. Xilliga jiilaalka, sidoo kale waa suurtogal in la tirtiro laamaha, haddii kale waxaa laga yaabaa in ay ka yareeyaan koritaanka ubax guga.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad qaadato qalab wanaagsan. Ma ahan mid aad u macquul ah in lagu daaweeyo jeermi-dilaha si looga fogaado cudurka. Waxaad u baahan doontaa:
mindi aad u fiiqan;
sawir gacmeed (haddii caleemaha gaboobay oo aan la jarin qalab kale);
Waxaad isticmaali kartaa maqas goosad ah ama mindi fiiqan.
Dhimistu waa inay noqotaa hal rubuc oo hal mitir ah oo ka sarraysa xadhigga, xagasha waa inay noqotaa 45 darajo. Waxaa ugu wanaagsan in la soo saaro laamo la mid ah kan ugu weyn.
Marka manjooyin waa in aan qiimo lahayn jarida in ka badan laba-meelood laba oo laamaha, waxay dhaawici doontaa oo keliya geedka iyo wiiqi.
Markaas waxaad samayn kartaa jiidaya caleemaha dhalinyarada - xir xuubka dhexe si taageerada, iyo gooyaa caleemaha dhinaca, tegaya inta u dhaxaysa saddex iyo shan caleemo.
Ka dib markii manjooyin waxaad u baahan tahay inaad bilowdo quudinta dhirta leh nitrogen iyo Bacriminta fosfate., waxay ka caawin doontaa inuu helo xoog ku beerista caleemaha cusub iyo ubaxa. Daryeelka intiisa kale ma aha mid ka duwan maalin kasta.
Maxaa la sameeyaa haddii dhirtu baaba'do?
Haddii, ka dib markii aad u culus ee caleemaha, geedka bilaabmaa inuu dhinto, weli waa suurtogal in la badbaadiyo. Waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo dhulka in badan oo leh nitrogen iyo Bacriminta fosiyada si ay ubax u hesho nafaqooyinka iyo koraan si xoog leh. Marnaba looma diidi karo mar kale! Waraabinta waa in sidoo kale la kordhiyaa wax yar.
Haddii aad rabto in aad gaaro qaabka la doonayo ee taajka iyo ubax xoog leh, manjooyin waa lagama maarmaan. Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha inay qaadaan marar badan oo aanay jarin in ka badan saddex-meelood laba oo caleemaha ah, haddii kale waxaad dhaawici kartaa geedka ama xitaa burburin. Under shuruudaha oo dhan, hibiscus hubaal ku farxi doonaa leh cagaar cagaaran cagaaran iyo ubaxyo badan oo dhalaalaya iyo qurux badan.